MacBook 12 "haizobatanidze Thunderbolt 3 kumhanya | ndinobva kuMac
Iyo nyowani 12-MacBook yaisazokwenenzvera kumhanya kweThunderbolt 3 kuburikidza neiyo USB Type-C chiteshi
Miguel Angel Juncos | | apuro, Noticias, Mac makomputa
Apple nyowani 12-Macbook, iyo ultrabook iyo yakabvisa pachigaro MacBook Air seye thinnest laptop yekambani, yakaunzwa nayo shanduko yakakura yekugadzira izvo zvichaisa mwero uyo vamwe vazhinji vachatevera nekuve vekutanga kuisa iyo yatove yakakurumbira USB Type-C chiteshi, zvisinei zvinosuruvarisa uye kubva pane zvatakakwanisa kuziva, ichi chiteshi chinosanganisa michina hachitsigire kumhanya kwakamisikidzwa neTinhira 3.
Intel yakazivisa kuComputex kuti iyo yeThunderbolt 3 yekubatanidza ichakwanisa kuendesa data pakati pemakomputa uye ekunze ekunze pakumhanya kwe40 GbpsMune mamwe mazwi, ichave tekinoroji inokurumidza kwazvo pakati pevaya vese vanobatanidza kumwe kubatana nhasi. Kuve kunyangwe zvakapetwa kaviri sekumutangira, Thunderbolt 2, iyo inowanikwa mune mazhinji aripo Apple makomputa.
Shanduko hombe dzatichaona muThunderbolt 3 ndiko kutsigirwa kweiyo protocol yeUSB uye kuregedza kwevanobatanidza zvivakwa vachitora nguva ino yakafanana USB Type-C yekubatanidza. Kupatsanura Thunderbolt kubva kuUSB Type-C zvinongedzo kuti tishandise isu tichafanirwa kutarisa kana ivo vachisanganisira logo yemheni zvine hunhu nekuti zvikasadaro izvi zvaizoratidza kuti havazowirirana uye zvinongoshanda mukati meprotocol uye nekumhanyisa kumhanya kweUSP 3.0 , saka yaizogara pane ine mwero 5Gbps, zvinova ndizvo zvaizoitika mune yazvino 12 ″ MacBook.
Kutinhira 3 kwakagadzirirwa kumhanya neiyo nyowani Intel Skylake machipisi, iyo ichaunzwa muhafu yepiri yegore pakutanga, uye malaptop makumi matatu nemamwe madhipatimendi anotarisirwa kutsigira tekinoroji yekubatanidza yekutakura pakupera kwegore. Nekudaro, vashandisi veMac vanoda kushandura kana kutenga komputa nyowani, vanofanirwa kumirira aya maSkylake-based Macs kuti aoneke.
Vashandisi vanozokwanisa kurodha yavo Laptops ine Kutinhira 3, kwanisa kuendesa kusvika ku100 watts emagetsi. Kunyangwe Thunderbolt 3 inobvumidza kubatana kwemamonitor maviri mukugadziriswa kwe4K pakombuta imwe chete panguva imwe chete netambo imwe, zvichizogonawo kuendesa 4k bhaisikopo kubva kune yekunze chengetedzo mudziyo kuenda kuPc mumasekondi makumi matatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo nyowani 12-MacBook yaisazokwenenzvera kumhanya kweThunderbolt 3 kuburikidza neiyo USB Type-C chiteshi
Yahoo inobvisa rutsigiro rwemuno rwekufananidza vanobatika uye tsamba paMac akura
Tweetbot yakagadziridzwa yeMac uye inosvika pane inotarisirwa vhezheni 2.0